Exclusive: SoftBank comms chief Gary Ginsberg takes leave to aid Bloomberg campaign: sources | Politicopathy
သီးသန့်သီးသန့် - SoftBank ၏ဆက်သွယ်ရေးအကြီးအကဲဂယ်ရီဂျင်ဘာ့ဂ်သည် Bloomberg ၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုကိုခွင့်ပြုခဲ့သည်
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 28, 2020 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 28, 2020
ရိုက်တာသတင်းဌာန အမေရိကတိုက် အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု
စာဖတ်ချိန် - <1 မိနစ်
(Reuters) – Gary Ginsberg, the global head of communications for SoftBank Group Corp, has taken an indefinite leave of absence to advise Michael Bloomberg’s U.S. presidential campaign, people familiar with the matter said on Friday.
Ginsberg wasalong-time top advisor to Rupert Murdoch, and was the top communications executive at Time Warner before AT&T Inc acquired the media conglomerate in 2018.
ကျွန်ုပ်တို့၏စံချိန်စံညွှန်း:အဆိုပါ Thomson Reuters Trust မှအခြေခံမူ။
ယခင် Post မှ Mick Mulvaney Claims The Media Is Covering Coronavirus Only To 'Bring Down' Trump
Next Post Experts at CPAC: United States and China Are Involved ina'Cold Tech War'
Canada and the United States haveaprofound and multifaceted partnership and alliance, strengthened by shared values and interests. The
The University of California Strike Enters Its 4th Month
As winter comes toaclose and the final quarter of the academic year approaches, wildcat strikers throughout the state
လူကြည့်အများဆုံး (လွန်ခဲ့သော ၂၄ နာရီ)
လူကြည့်အများဆုံး (လွန်ခဲ့သော ၇ ရက်)
Politicopathy သည်နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာသတင်းများအတွက်ထိပ်တန်းအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းကိုမျှတမှုအတွက်လစ်ဘရယ်နှင့်ရှေးရိုးစွဲရင်းမြစ်အမျိုးမျိုးမှစုစည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။
တွစ်တာ 1247098664285171714 အပေါ် Replyတွစ်တာ 1247098664285171714 အပေါ် Retweetတွစ်တာ 1247098664285171714 အပေါ်လိုပဲ
တွစ်တာ 1247098017401802752 အပေါ် Replyတွစ်တာ 1247098017401802752 အပေါ် Retweetတွစ်တာ 1247098017401802752 အပေါ်လိုပဲ
တွစ်တာ 1247092617667477505 အပေါ် Replyတွစ်တာ 1247092617667477505 အပေါ် Retweetတွစ်တာ 1247092617667477505 အပေါ်လိုပဲ